Fiaraha-Monina | Desambra 2021
Community, Company Mpanao Gazety Fiaraha-Monina Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina, Fanabeazana Ara-Pahasalamana Ny Fizahana Fanatanjahan-Tena Mavesatra News Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Vaovao Orinasa, Vaovao Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Biby Fiompy Fiaraha-Monina, Fahasalamana Lalao Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina, Vaovao Fialam-Boly Orinasa, The Checkout
Jereo izay lazain'ny mpampiasa SingleCare — ary mitahiry
Ireto misy sasany amin'ireo tantara tsara indrindra momba ny tahiry fikarakarana natolotry ny mpampiasa SingleCare tamin'ny lohataona 2020. Nahazo aingam-panahy? Avelao ao amin'ny media sosialinay ny hevitrao momba ny SingleCare.
Fanomezana mamerina — ho an'ny fahasalamana
Rehefa miantsena fanomezana fialantsasatra ianao dia diniho ny fividianana amin'ireo orinasa 12 ireo izay miverina amin'ny fikambanana fiantrana hanatsarana ny fahasalaman'ny olona erak'izao tontolo izao.
Inona no atao hoe miaina amin'ny fanahiana
Ny ankamaroan'ny olona dia mahatsiaro ho sahiran-tsaina na miady saina amin'ny fotoana iray, fa rehefa miaina amin'ny fanahiana ianao dia tsy miala mihitsy io fahatsapana tsy milamina io. Ity ny fomba hiatrehana.
Inona no atao hoe miaina miaraka amin'ny fahaketrahana: lahatsoratra iray manokana
Ho an'izay rehetra miaina miaraka amin'ny famoizam-po dia fantaro izao: Tsy mbola farany izany. Amin'ny fitsaboana sahaza anao dia afaka miaina fiainana ara-dalàna ianao.
Ny fomba nahazoako Diagnostika diabeta marina - ary nianatra niaina izany
Voamarina fa diabeta Type 2 aho 20 taona lasa izay. Ity no zavatra nianarako momba ny fiainana amin'ny diabeta-sy ny fitsaboana azy.
Inona no atao hoe miaina miaraka amin'ny endometriozy
Vehivavy 175 tapitrisa manerantany no miaina miaraka amin'ny endometriozy. Fantatro fa tsy irery aho, saingy tsy manampy ny fanaintainana izany. Ity misy.
Inona no atao hoe miaina miaraka amin'ny hypothyroidism
Niaina niaraka tamin'ny hypothyroidism aho nanomboka tamin'ny faha-18 taonako. Tsy nanakana ahy tsy hiaina ny fiainako tsara indrindra izany — alao antoka fa hahita ny dokotera izay marina aminao.
Ny aretin-tratra idiopathic juvenile dia aretina autoimmune izay manafika ny tonon-taolana ny vatana. Manan-janaka mipetraka ao amin'ny JIA aho, ary izany no fomba fanaon'ny fianakavianay.
Inona no tena atao hoe miaina miaraka amin'ny psoriasis
Ny psoriasis dia aretin-koditra. Fa ny fiainana miaraka amin'ny psoriasis, dia misy fiatraikany ara-tsaina sy ara-pihetseham-po marina. Afaka manampy ny fitsaboana sahaza — aza kivy.
Nanomboka tamin'ny fanaintainana niaraka, henjana maraina, ary harerahana. Avy eo ny valin'ny fitsapana nataoko dia nanamafy izany, miaina miaraka amin'ny aretin-tratra rheumatoid aho manomboka izao.
Mandehandeha manodidina: Inona no atao hoe miaina vertigo
Ny fahatsapana ny fihodinana tsy tapaka dia mahafinaritra amin'ny ankizy, fa rehefa olon-dehibe? Io dia tsy. Ny fiainana amin'ny vertigo dia sarotra, soa ihany fa misy fitsaboana mahomby.
Fifehezana ny tsy voafehy: Miaina miaraka amin'ny OCD mandritra ny areti-mandringana
Olon-dehibe 1 amin'ny 40 no miaina miaraka amin'ny OCD any Etazonia, ary ny areti-mifindra COVID-19 dia nisy fiatraikany tamin'ny toe-pahasalamany. Ireto misy torohevitra momba ny fiatrehana ny OCD mandritra ny fotoana tsy azo antoka.
Migraine miaraka amin'ny aura sy pilina fanabeazana aizana: fitambarana mampidi-doza?
Ny migraine miaraka amin'ny aura sy ny fifehezana ny zaza dia mety hampitombo ny fahatapahan'ny lalan-dra. Vakio ny tantaran'ny vehivavy iray ary fantaro ny safidin'ny zaza tsy azo antoka migraine.
Ny fomba namantarako-sy niainako niaraka tamin'ny — fikorontanan'ny disphôlôgy alohan'ny fotoana (PMDD)
5% –10% ny vehivavy voan'ny aretin-kozatra alikaola mialoha ny fiterahana. Vao tsy ela akory izay, vehivavy maro no nitantara ny momba ny PMDD momba ny atao hoe fiainana miaraka amin'ny PMDD.
Voamarina fa voan'ny kanseran'ny vozon-tranonjaza aho rehefa bevohoka. Manana zazakely salama aho izao ary tsy voan'ny homamiadana — saingy nahafantatra zavatra betsaka momba ny HPV sy ny fitondrana vohoka teny an-dàlana aho.
Ny karatra fitsitsiana dia mampisy fahasamihafana Rx iray isaky ny mandeha
Mitahiry $ 40 etsy na any mety tsy dia hoatr'izany nefa mitombo haingana. Ity misy fomba nanampian'ny FamilyWize ny olona amin'ny elanelam-potoana fandrakofana Medicare sy COVID-19.
Ny rafitra fanaraha-maso glucose maimaimpoana maimaimpoana dia mety lafo. Ny vidin'ny vola ho an'ny sensor dia manodidina ny $ 129.99, saingy afaka mitahiry amin'ny karatra fitahirizana SingleCare ianao.
Ny tantaranay tahiry SingleCare ankafizinay indrindra
Ho fankalazana ny Herinandron'ny Tahiry SingleCare, nanangona ny hevitra momba ny SingleCare ankafizinay foana izahay hankalazana ny zavatra rehetra mifandraika amin'ny tahirin'ny famandrihana.
Jereo ny tsikera SingleCare tsara indrindra tamin'ny volana feb
Niakatra ny fitiavana tamin'ity volana ity, ary tsapanay tamin'ireto hevitra momba ny SingleCare ireto. Vakio izay nolazain'ny mpampiasa momba ny tahirin'ny resak'izy ireo.
Ny hevitra tsara indrindra amin'ny SingleCare tamin'ny Novambra
Fankasitrahana hatrany ny vondrom-piarahamonina SingleCare izahay. Ireto misy sasany amin'ireo tsikera momba ny SingleCare ankafizinay sy ny tantaram-pitehirizana tamin'ny volana novambra.
fari-pahaizana mahazatra momba ny siramamy ao anaty ra aorian'ny sakafo
inona no ampiasaina ny vovo-drindrina arina
sarany mahazatra sy mahazatra amin'ny fomba fitsaboana
hafiriana no maharitra ny focalin xr 10mg
ahoana no fanalana ny moka mena
ny fomba manala ny holatra mafy amin'ny rantsan-tongotra